1. Vatomamy tsara tarehy miloko Tsiro manankarena Miaraka amin'ny akora samihafa Fa rehefa miaraka izy ireo dia miara-mandeha tanteraka, miresaka fudge isika. Menio iray izay mety hiheveran'ny olona maro fa sarotra izany. Ary aza te handray risika Nefa raiso an-tsaina izany, sakafo mora raisina. Tsy te sy sarotra Sakafo tsindrin-tsakafo tsy maintsy hisakafoanana sy hohanina indray ny ankizy nefa tsy mankaleo. Aorian'izany, avia hiara-mifalifaly. Miaraka amin'ny fomba fanaovana fudge azon'ny rehetra atao. Raha ny marina, fudge tsindrin-tsakafo miaraka amina crispy ivelany sy malefaka ao anatiny Miaraka amin'ny sôkôla sy ronono mifangaro Azo antsoina hoe firafitry ny tsindrin-tsakafo, ny fisehoan'ny endrik'ilay fudge Izany dia hanome anao tsiro malefaka sy malefaka, miafina amin'ny tsiro sôkôla matsiro sy fudge tena izy, tsy misy dingana sarotra sy fangaro. Sakafo tsindrin-tsakafo izay tena tian'ny ankizy sy tiany indrindra. Aorian'izay dia andao hamboarina ireo fangaro. Fangaro sy fitaovana tsotra, fa miavaka ny tsiro.
2. Fudge no karazana tsindrin-tsakafo inona marina? Canona ronono malemy vita amin'ny mamy 1 (14 oz)
3. Chips Chocolate Ronono 3 kaopy
4. Atsipazo menaka legioma na dibera
6. Vilia sôkôla
7. Taratasy Freud
8. Fomba fanaovana tsindrin-tsakafo, matsiro ary miraikitra • araraka ao anaty lovia voaomana ilay ronono mifangaro mamy. • Avy eo atsofohy ao anaty lovia ny ronono sôkôla vita amin'ny ronono. Avy eo afangaro ireo fangaro. • Avy eo dia mora ny fomba. Arotsaka ao anaty microwave amin'ny hafanana be Maharitra 1 minitra eo ho eo. • Hetezo ny taratasy Freud amin'ilay lovia vita amin'ny pastry efa voaomana. Atsofohy avy eo ny menaka legioma na asio dibera tsy masira kely. Mba tsy hifikitra amin'ny freud ny sôkôla mba hanamorana ny fanalana azy.
9. • Araraka ao anaty vilany na lasitra efa nomanina ny sôkôla. Mampiasà ladle mba hamafana ny tarehy. Avy eo atsofohy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny adiny 2 eo ho eo ilay fangaro mandra-pahatongan'ny fahataperan'izany.
10. • Rehefa vata fampangatsiahana mandritra ny 2 ora dia esory ny lasitra. Avy eo dia avoaka, aforeto amin'ny barany toradroa, na tapaho amin'ny haben'ny manaikitra rehefa ampiarahina amin'ny siramamy. Na flake siramamy kely Mba hanaovana ny tsiro mamy dia apetaho eo ambonin'ny fudge. Ity fotsiny dia matsiro. Fudge dia sakafo maivana azo omanina mialoha ho an'ny fety. Satria azo tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana Indrindra ho an'ny fety miaraka amin'ny ankizy na ho lovia mamy aorian'ny sakafo hariva. Izany dia alaina ho an'ny fanompoana mora sy tsiro malefaka Na hanompo ny vahiny mandritra ny fotoam-pivarotana kafe sy dite, izay mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny zava-pisotro mafana rehetra Ho fanampin'izay, ny fahafahanao manao izany amin'ny tenanao dia afaka manampy ihany koa ny matsiro sy ny tombony azo avy amin'ny voa, voanjo na voankazo maina. Ataovy fudge tsy manam-paharoa amin'ny manodidina azy, avy eo andao hanao fudge ao anaty vata fampangatsiahana ho an'ny vahiny na fety !!